Kitawonsa - Wikipedia
Kitawonsa( pronounciation of "Kitawonsa" (help·info)) yɛ bosome a ɛtɔ so nson wɔ afe no mu. Wɔ borɔfo kasa mu no yɛfrɛ no July. Kitawonsa hyɛ Ayɛwohomummɔ ne Ɔsanaa ntam. Ɛyɛ bosome a ɛtɔ so nnan a ɛwɔ nnafua aduasa baako. Wɔde ne brɔfo din July no too Romanfoɔ panin bi a yɛwoo no bosome kitawonsa no mu. Saa bosome yi wɔ nnafua aduasa baako te sɛ abosome Ɔpɛpɔn, Ɔpɛnimma ne Ɔbɛnem.
Kitawonsa yɛ edin a Akanfoɔ a wɔwɔ ɔman Gaana mu de ma bosome a ɛtɔ so nnson wɔ afe no mu. Kitawonsa yɛ ofupɛ bere. Ɛyɛ bere a ɛtwatoɔ wɔ nsu toɔ bere a edin kan wɔ anaafo fam wɔ ɔman Gaana mu, ena ɛyɛ nsu toɔ bere wɔ atifi fam wɔ ɔman Gaana mu. Kitawonsa bosome wɔ afahyɛ bi tisɛ Asafotu-fiam, Panafest, Ohum, Damba, Bakatue ne Kente a ɔman Gaanafoɔ edi.
Nna atitirew anaa nnapɔnna wɔ bosome no mu[sesa]
Wɔ ɔman Gaana mu no afahyɛ ahorow ne nkaeda ahorow bi wɔ hɔ a wɔhyɛ no nsow wɔ Kitawonsa bosome no mu. Ebi ne: Gaana Adehyeman Nkaedi da (Republic Day). Afe biara Kitawonsa da a edi kan no Ghanafo kae da a ɔman no bɛyɛɛ adehyeman. Saa da nnyɛ dapɔnna nanso wɔkaw saa da yi afe biara wɔ Ghana.
Kente a ɔman Gaanafoɔ edi.
Nnwoma ahodoɔ a menyaa mmoa firii mu[sesa]
↑ 2.0 2.1 http://www.afropedea.org/asante-ashante-calendar
↑ 5.0 5.1 https://www.easytrackghana.com/cultural-overview-ghana-festivals.php
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Kitawonsa&oldid=60419"
Nsesae ba kratafa yi so da 4 Ogyefuo 2022, mmere 08:42.